एक्लिए यज्ञ ! « Bagmati Page
एक्लिए यज्ञ !
काठमाडौं । ओखलढुंगाका कम्युनिष्ट नेता यज्ञराज सुनुवार एक्लिएका छन् । माधव नेपाल गुटका नेताका रुपमा परिचित नेता सुनुवारलाई उनका सहकर्मिले साथ छोडेपछि उनी एक्लिँदै गएका हुन् ।
ओखलढुंगाका प्रतिनिधिसभा सांसद सुनुवार प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा लागेपछि उनका पूर्व एमालेका सहकर्मिहरुले साथ छाडेका थिए । आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न प्रधानमन्त्री विरुद्ध ६९ नम्बरमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी नेताहरुको साथ लिएका उनले ओली नेतृत्वको नेकपाको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
सुनुवारले देखाएको विरोधी भावका कारण उनको राजनीतिका सयौ सहयोद्धा उनीसँग रुष्ट छन् । ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यको हैसियत नभएको मन्तव्य दिएर आलोचित बनेका सुनुवार अहिले आफैँ हैसियत विहिन बन्न पुगेको उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।
एमालेबाट टाढिएर माओवादीसँग नजिक बनेका सुनुवार अदालतले नेकपा एकता बदर गरेपछि यता न उताका बनेका छन् । पहिले एमालेमा हुँदा लोकप्रिय मानिएका माननिय अहिले उही एमालेमा कार्यकर्ताले नरुचाउने नेतामा परेका छन् ।
अदालतले पूर्व अवस्थामा एमाले ब्युँताए पनि यज्ञराज ओखलढुंगा एमालेमा पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् ।
शुक्रबारबाट माओवादीका नेता कार्यकर्ताले समेत सुनुवारको साथ छाडेका छन् । अब उनलाई नजिकका केही व्यक्तिको मात्र साथ रहेको एक जिल्ला नेताले बताए ।
”हाम्रो हैसियत खोज्ने उनको अहिलेको हैसियत देख्दा दया लागेर आउँछ, उनले भने- आत्माआलोचना गरेर एमालेमा आउँछन् कि माओवादी तिरै जान्छन् टुंगो देखिएन ।”